Famaritana modely nomeraon'ny CP-F22 Vatana vatan'ny 304 vy tsy miova Fitaovana rano mangatsiaka sy mafana Isaky ny tantana tokana vita amin'ny volon-koditra maoderina Type faucet an-dakozia fonosana kitapo vita amin'ny kitapo sy baoritra 1. Ity faucet an-dakozia LED mamirapiratra ity dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304 , ataovy izay haharetan'ireo akanjo sy rovitra be dia be, mampihena ny olan'ny fahasimbana matetika amin'ny fantsona,. 2. LED raikitra amin'ity faucet an-dakozia ity.Tsy mila herinaratra, ...
Famaritana modely nomeraon'ny CP-F18 Vatan'ny vatana 304 vy tsy miova Fitaovana rano mangatsiaka sy mafana Isan'ny tanany tokana famaranana nodiovina Style Modern Type Kitchen faucet fonosana kitapo sy baoritra Ity faucet ao an-dakozia ity dia vita amin'ny vy tsy mitarika 304. Mety ho an'ny fandroana na lakozia , tena mahafinaritra sy mateza. Ny rindrina anatiny dia malama, tsy misy harafesina, tsy misy loto, tsy misy loto faharoa. Izy io dia afaka manome anao sy ny fianakavianao vaovao, salama ary voasivana ...
Famaritana nomerao isa CP-F06 Vatan'ny vatana 304 vy vy Function Single Number of Single Single Finished Brush Style Modern Type Kitchen faucet Packing Foam kitapo sy carton ity fantson-drano fisotro ity dia misy spout 360-degree mihodina ho an'ny fampiasana rano mety, mora feno ambony vera na vilany. Ny rindrina anatiny dia malama, tsy misy harafesina, tsy misy loto, tsy misy loto faharoa. Izy io dia afaka manome anao sy ny fianakavianao vaovao, salama ary voasivana ...
lovia famafazana lovia tokana ao anaty lakozia vita amin'ny vy vy
Famaritana nomerao isa CP-P11 habe namboarina namboarina vita amin'ny vatan'ny vatana 304 vy tsy vita vita vita amin'ny volonta vita vita borosy na borosy Type lovia tokana fonosana Kitapo plastika sy fampahalalana momba ny fampiasa amin'ny baoritra Faucet TSY MISY Drainage NO. Ity lovia milentika tsy misy fangarony ity dia ahafahanao manasa entana be, misoroka ny fihoaram-pefy amin'ny kaontera dakozia. Ny rihana an-dakozia vita amin'ny tanana dia vita amin'ny vy tsy manara-penitra 304 ho an'ny faharetana maharitra sy fanoherana ny nify. Sel material tsara indrindra ...
lovia kely manidina an-dakozia nilentika an-dakozia vy vy
Famaritana nomerao isa CP-P21 habe namboarina vita amin'ny vatan'ny vatana 304 vy tsy vita vita vita amin'ny volonta vita vita vita amin'ny volon-koditra na borosy Type lovia roa fonosana Kitapo plastika sy fampahalalana momba ny fampiasa amin'ny baoritra Faucet TSY MISY Drainage NO. Ity vilia baolina roa ity dia manome ny fahalalahan'ny lovia tokana miaraka amina fiasan'ny lovia roa sosona. Ahafahanao manasa entana be amin'ny lovia roa milentika, Misoroka ny tondra-drano amin'ny latabatra lakozia.
Kitapo vita amin'ny lakozia lovia tokana vita amin'ny vilia vy
Famaritana nomerao isa CP-P08 habe namboarina vita amin'ny vatan'ny vatana 304 vy tsy vita vita vita amin'ny volonta vita vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny borosy na lozabe Type lovia tokana fonosana Kitapo plastika sy fampahalalana momba ny fampiasa amin'ny baoritra Faucet TSY MISY Drainage NO. Ity lovia milentika tsy misy fangarony ity dia ahafahanao manasa entana be, misoroka ny tondra-drano amin'ny latabatra dakozia. Ny rihana an-dakozia vita amin'ny tanana dia vita amin'ny vy tsy manara-penitra 304 ho an'ny faharetana maharitra sy fanoherana ny nify. Vady tsara indrindra ...
haingon-trano haingon-trano laser cuttig
Famaritana modely nomeraon'ny CP-SF010 vita vita polished / brushing Size gorodona na rindrina nitaingina Material Metal na vy tsy miendrika endrika endrika namboarina nanao endrika Natural. Ny endriny dia entanin'ny zaridaina lohataona. Ny voninkazo na ny endriny amin'ny lamina dia aseho amin'ny fomba misintona amin'ny alàlan'ny fizarana symmetrika lamina geometrika tsotra. Ny karazany isan-karazany misy endrika samihafa, toy ny voninkazo, kintana, balaonina, fo, ravina, dian-tongotra sns ... afaka ...
tohatra tohatra vy vy
Famaritana nomerao isa CP-SR002 Vita poloney / borosina haben'ny gorodona na rindrina nitaingina Metal na vy vy endrika Per namboarina mafy Hatrany, fanoherana fiantraikany, tsy mora deformation. Fanoherana tsara ny rano sy ny harafesina, tsy misy harafesina amin'ny tontolo mando, ny fahaizan'ny anti-oxidation mahery, mateza ho an'ny fampiharana ivelany maharitra. Tsy misy poizina, tsy misy loto. Ny tohatra fiakarana dia manana volon-koditra manjelanjelatra volafotsy ary fijery kanto miaraka amin'ny fiolahana ...
asa kanto vy amin'ny fanapahana laser
Famaritana nomerao isa nomen'ny CP-2T-SF009 vita vita poleta / borosy fitaovana 304 vy tsy miova, Silicon Style Isaky ny endrika noforonina haingon-trano lehibe ho an'ny haingon-trano any an-tokotany, kabine, toby, tokotany ary fanomezana an-trano. Izahay dia mamolavola zavakanto vy izay mitondra fifaliana sy fientanam-po ary hatsaran-tarehy amin'ny fiainanao. Lavorary ho an'ny haingon-trano ,, haingon-trano, birao fandraisam-bahiny. Fomba famantarana metaly metaly tsy manam-paharoa: ny endrika tonga lafatra dia mety ho lasa fifantohana tsy manam-paharoa amin'ny toerana rehetra. Ny haingon-trano amin'ny rindrina rehetra dia hitondra mampiavaka ...
vokatra vita amin'ny vy isan-karazany
Ny milina laser-tsika dia afaka mamokatra tontolon'ny fanapahana isan-karazany. Misy entana semi-vita marobe azontsika alamina. Toy ny manaingo ny boaty vita amin'ny takelaka mahazatra sy efajoro miaraka amin'ity fonony kanto ity; Mora manafina boaty vita amin'ny karda; Ny endrika madio sy malefaka dia mety tsara amin'ny fampiasana trano na ara-barotra; Fandokafana izay haingon-trano rehetra. Lehibe habe hitehirizana boaty haavo efajoro farafahakeliny ary koa fatiantoka napkin na tavy tsirairay. Ny ambany misokatra dia ahafahana manolo mora ny boaty tsy misy b ...
Takona fandroana efajoro voafaritra voafina
Laharana maodely CP-2T-H30FJB Vita ny fametahana vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina Overhead shower refes Length 12 "(300mm) Width 12" (300mm) Hatevina 2mm Shower arme dimension 400x25x14mm Havoana fandroana tohana boribory 25x25x185mm Halavan'ny fantson-tànana fandroana tànana 1500mm Fitaovana filokana 304 vy vy , silika Mixer 304 vy tsy misy fangarony, plastika Hand shower fandroana 304 vy tsy misy fangarony, fantsom-pandroana silika am-paosy 304 ...
Loha fandroana boribory napetaka amin'ny rindrina
Famaritana nomerao isa CP-2T-H30YJB Vita ny fametahana voaravaka rindrina nitaingina halavan'ny fandroana ambonimbony Diameter 12 "(300mm) Hatevina 2mm refy lohan-doha fitaratra Φ27x185mm Halavan'ny fantson-drano fandroana tànana 1500mm Fitaovana fandroana 304 vy vy, silika Mixer 304 vy vy, plastika tànana fandroana fandroana 304 vy tsy misy fangarony, fantsom-pandroana vita amin'ny silikola tanana 304 vy tsy misy fangarony, mpihazona fandroana tanana vita tanana 304 ...